Makeup mainty volo maso
ianao eto: Home endrika Treatments Makeup mainty volo maso
Mba hamorona ny mahavariana sy ny tsara tarehy sary, tsy maintsy nihaino ny lanjany samihafa tsipirian'ilay. rehetra mahalala, ny makiazy dia tokony ho araka ny loko sy ny karazana hoditra, volo sy akanjo, ary koa ny Accessories ary na dia toa tsy manan-danja toy izany Raha vao jerena, tsipiriany, toy ny fantsika sy ny firavaka poloney. Fa ny tena zava-dehibe, inona no tokony ho tsara mety make-up - izany volo loko. Tompon'ny blond curls, matetika indrindra loko ny volo, Zava-dehibe koa ny mihaino ny fanolorana ny matihanina make-up mpanakanto, mba ho afaka mamorona tsara tarehy sady mahavariana Eye make-up volo ao an-trano.
Natural makiazy for volontsôkôlà volo
Io safidy meykapa tena natao ho an'ny tovovavy, amin'ny maizina na tanned hoditra. Mba hamorona fa ilaina ny mampiasa pensilihazo na matoatoa va ny volamena-fasika alokaloka, izay tokony ho voafantina ny famirapiratry ny mazava, miorina amin'ny hoditra swarthiness: ny mainty ny hoditra, ny famirapiratry ny loko tokony ho voafidy. Golden makiazy tsipika madio tsara dia tsy maintsy hozaraina miaraka tamin'ny karavasy tsipika, izay mamorona fomba voajanahary sy unobtrusive. Eyelashes amin'ny vatana izany, kely Tint ny volontsôkôlà ranomainty, ary ny hampihatra ny moisturizing molotra balsama na mazava gloss. Fa avy ny mena tsara kokoa ny tsy ho kivy.
Na inona na inona ny lokon'ny volony dia foana Eye make-up volo Mety ho tafiditra amin'izany ny fampiasana ny smoky aloka. Koa, ny ankamaroan'ny tompon'ny blond curls kevitra ny hampiasa matte lokomena sy ny aloka. Mifidy ny aloky ny lokomena sy perila matoatoa, zava-dehibe ny tsara manatona ny fifantenana ny loko.
koa, tsy hanadino mihitsy fa, fa ny fototry ny misy avo-tsara make-up - dia efa nomaniny tsara hoditra, ny volon'ny izay tsy maintsy mifanaraka niaraka tamin'ny fanampian'ny fototra, concealer sy ny vovoka. Ny ankizivavy amin'ny hoditra hatsatra fihodirana tanteraka fototra alokaloka ivoara, ary ny hatsaran'ny, izay ny fehezan-dalàna ny mainty alokaloka Tsara ny mampiasa menaka paiso na beige.
Noho izany, miasa eo amin'ny famoronana ny make-up, Light Brown ankizivavy Tsy voatery tsy misy fepetra hankatò ny fitsipika sy ny tari-dalana. Ny fahaizana manandrana foana, ny zava-dehibe indrindra - aza manadino momba ny fahaiza sy hanongilan-tsofina ny amin'ny fomba.
Makeup for volontsôkôlà maso
Makeup for maizina maso.
Ho-ho an'ny maso sy ny molotra
Hariva make-up for volontsôkôlà maso
Sokajy: endrika Treatments